ဗိသုကာ – pabiak
Politics lam thu ka uar. Technologyabik tak in mobile tech, create application le ebook tuah ih digital marketing lam zir hi ka tui bik mi asi.
တင်ပြီးသမျှ post များ
အွန်လိုင်းမှာပြန့်နေတဲ့ ထီးလိုမင်းလိုဘုရားဖြစ်စဉ်ရဲ့ အဖြစ်မှန်ကိစ္စက ဒီလိုပါတဲ့ ထီးလိုမင်းလို ဘုရားဖြစ်စဉ်ကိစ္စရှင်းလင်းခြင်း
ချစ်ခင်ရိုလေးစားရပါသောမိတ်ဆွေများခင်ဗျာ ယနေ့ နံနက်မှစ၍ facebook လောက တွင်ပျံ့ နှံ့ လျက်ရှိသော ထီးလိုမင်းလိုဘုရား၏ ပထမ photo ထီးတော်ရှိနေပါလျက်ပုံ ထွက်လာသောအခါ ထီးတော်နဲ့ တလွဲပေါ်ထွက်နေခြင်း ဒုတိယ photo တိမ်များ အထက်တွင်စေတီတော်များ ပေါ်ထွန်းနေခြင်း စသည့် ပုံနှစ်ပုံ စတင်ပျံ့ နှံ့ ခဲ့ပါသည်။ ထိုပုံများနှင့်အတူ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ထိုပုံပေါ်နေသော ဖုန်းအား ကိုင်၍ကြည့်ရူ့ နေသော ပုံပါ ထပ်မံပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ထိုပုံများသည်
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ဖုန်းဖြင့် ရိုက်ကူးရာ တွင်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်ဟု Facebook တွင် တင်နေသူများလဲ တွေ့ ရှိရပါသည်။
ထို ကိစ္စအဝဝ၏ ဖြစ်စဉ် အမှန်မှာ.. တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ ထိုဘုရားတွင်ရောက်ရှိ ချိန်တွင်အဖွဲ့ဝင်များ ထဲမှ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီး တစ်ဦး၏ဇနီးမှ ဖုန်းဖြင့်ရိုက်ရာမှ ထိုသို့ပေါ်လာခြင်းဖြစ်၍ အံ့သြစွာဖြင့်တောင်းယူကြည့်ရူ့ နေခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်ထိုဖုန်း ၊ ထိုပုံများနှင့် လုံးဝ လုံးဝ ပတ်သက်မှု့မရှိပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။တချို့သော သူများမှာ… တပ်ချုပ်ကြီးမှ ထီးတော် တင်ချင်သဖြင့်နာမည်ကြီးအောင် သတင်းလွှင့်သည့် ပုံစံဖြင့်ဝေဖန်နေကျသည်ကိုလဲ တွေ့ ရှိရပါသည်။ထီးတော်တင်မည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍တာဝန်ရှိသူများနှင့်တွေ့ ဆုံပြောကြားရာတွင်မိမိတစ်ဦးတစ်ယောက်ထဲထီးတော်တင်မည်၊မိမိတို့တပ်မတော်မှထီးတော်တင်မည်စသဖြင့် လုံးဝ လုံးဝ မပြောကြားခဲ့ပါမိမိလဲ ပါဝင်လျူဒါန်းမည်ဖြစ်ကြောင်းသာပြောကြားခဲ့ပါသည်။
Posted on August 29, 2016 August 29, 2016 Categories general KnowledgeTags ဗိသုကာLeaveacomment on အွန်လိုင်းမှာပြန့်နေတဲ့ ထီးလိုမင်းလိုဘုရားဖြစ်စဉ်ရဲ့ အဖြစ်မှန်ကိစ္စက ဒီလိုပါတဲ့ ထီးလိုမင်းလို ဘုရားဖြစ်စဉ်ကိစ္စရှင်းလင်းခြင်း